गगनजी, तपाईं र शेरबहादुरलाई भोट दिनुमा केही भिन्नता छ र ?- रमेश वडाल, अधिवक्ता - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
गगनजी, तपाईं र शेरबहादुरलाई भोट दिनुमा केही भिन्नता छ र ?- रमेश वडाल, अधिवक्ता
काठमाण्डौ क्षेत्र नं ४ का उमेदवार श्री गगन थापाको फेसवुकमा शेयर भएको एउटा चुनावी भाषण हिजोमात्र हेरेँ । उहाँले भन्नु भएको छ– ‘काग्रेस गरिव र सुकुम्वासीको पार्टी होईन, धनीमानीको पार्टी हो र गरिव सुकुम्वासीले सूर्यमा झ्याम झ्याम मतदान गरेहुन्छ । तपार्इंहरुको मत रुखमा चाहिंदैन, आदि । उहाँले झापामा पुगेर दिएको भाषणमा झापामा त सवै सडक चौडा र चिल्ला होलान् भनेको त होइन रहेछ भनी व्यङ्गय समेत गर्नु भएको छ । त्यसपछि मैले उहाँको फेसवुकमा शेयर भएको अन्य प्रचार सामाग्री समेत हेरेँ र काठमाडौं क्षेत्र नम्वर ४ को मतदाताको हैसियतले विना प्रतिक्रिया रहन उचित लागेन ।
यो क्षेत्रवाट २०६४ सालमा र २०७० सालमा नेपाली कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो । वहा नै २०७० सालमा निर्वाचित संसद समेत हुनुहुन्छ । यति मात्र हैन काठमाडौं उपत्यका भित्रको १५ सिट मध्ये गत संविधानसभामा वाह्र सिट कांग्रेसले जितेको थियो । यी चार वर्षमध्ये झण्डै तीन वर्ष नेपाली कांग्रेसले नै सत्ताको नेतृत्व गरेको थियो । यस क्षेत्रको मतदाताको हैसियतमा उहाँलाई केहि प्रश्न सोध्ने मेरो हक छ । तपाईलाई लाग्ला यी मेरा मात्र प्रश्न हुन् । तर यी आम मतदाताका पनि प्रश्न हुन् ।
१. काठमाडौंलाई धुलोमाडौंमा कसले परिणत गरेको हो ? तपाईं संसद र मन्त्री समेत वन्नु भयो तर, काठमाडौ उपत्यकालाई धुवाँ र धुलोवाट मुक्त गर्ने कुनै काम गर्नुभयो ? काठमाडौको कपन, ज्ञानेश्वर, गौशाला, चावहिल, वूढानीलकण्ठ क्षेत्रको वाटो तपाईंको कार्यकालभरी खाल्डो, हिलो र धुलोवाहेक के थियो ? कपन क्षेत्रमा वर्षामा हिलोले र हिउँदमा धुलोले वस्न टिक्न नसक्ने अवस्था कसले वनाएको हो ? यो क्षेत्र धुलोको ग्यास चेम्वरमा परिणत हुँदा तपाईं कता जानुभयो ? राजधानी शहरलाई विगत अवधीमा अस्तव्यस्त वनाउने तपाईं समेतका कांग्रेस उम्मेदवारलाई जनताले किन मत दिने ? आफू निर्वाचित राजधानी सहरलाई धुलोमाडौंमा परिणत गर्नेले अरु जिल्लामा प्रश्न गर्न मिल्छ ?
२. तपाईंले कांग्रेस धनीमानीको पार्टी भएको र गरिव सुकुम्वासीले सूर्यमा झ्याम झ्याम मतदान गरे हुन्छ, तपाईंहरुको मत रुखमा चाहिंदैन भन्नु भएको छ । काठमाडौको क्षेत्र नम्वर ४ को कपनमा सुकुम्वासीको वस्ती छ । के संविधानले गरिव र सुकुम्वासीप्रति राज्यको कुनै कर्तव्य पालना गर्नु पर्दैन ? तपार्इंको क्षेत्रका हजारौं संख्याका शहरी गरिव र सुकुम्वासीलाई कांग्रेसले काठमाडौंवाट हटाउन चाहेको हो ?
३. तपाईंले केहि मिडिया मार्फत स्वास्थ्य वीमाको जननी आफैं भएको प्रचार गराईरहनु भएको रहेछ । यो कुरा तपाईंको चुनावी भाषणमा समेत छ । तपार्इं २०७३ भाद्रमा मात्र स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो । तर स्वास्थ्य वीमा गर्ने संस्थाको स्थापना २०७० फागुनमा नै भयो । स्वास्थ्य वीमा नीति स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको समयमा २०७१ जेठमा आयो । नेकपा एमालेको केपी ओली सरकारले २०७३ जेष्ठ १५ गते ल्याएको वजेटमा स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने र तीन वर्ष भित्र देशभर लागू गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यसपछि तपाईं मन्त्री हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा स्वास्थ्य वीमा ऐन पारित भएन । एमालेले २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भनेको कार्यक्रमलाई तीन जिल्लामा मात्र सिमित गरिदिनु भयो । स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको समयमा मात्र ऐन पारित भयो । यी कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेवसाईटमा हेर्न सकिन्छ । अव भन्नुस् तपाईं स्वास्थ्य वीमाको जनक वा जननी कहिले र कसरी हुनुभयो ?
४. तपाईंले मिर्गौला रोगको उपचार निशुल्क गर्ने कुराको थालनी आफूले गरेको भनी प्रचार गराउनु भएको छ । मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नभए सम्म डाइलेसिस निशुल्क गर्ने घोषणा २०७३ श्रावण पहिलो साता वसेको केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको हो । सो कुरा त्यस वखत सवै मिडियामा आएको छ र मन्त्रालयको वेवसाईटमा २०७३ साउन ४ गतेको मितिमा कुन कुन अस्पतालले सो सेवा निशुल्क दिने हो भनी राखिएको छ । अव तपाईं त्यसको एक महिना पछि नियुक्त मन्त्रीले मैले नै सो कार्य थालनी गरेको भनी दावी गर्न मिल्छ ?
५. तपाईंले मन्त्री हुनु भन्दा केहि दिन अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध केहि मिडियामा पपुलारिटीको लागि वोल्नुभयो । मिडिया मार्फत तपाईं महान व्यक्ति भएको प्रचार गराउनु भयो । तर दुर्भाग्य जतिवेला एमाले र माओवादीले अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरे तव मन्त्री पदसँग तपाईंले निष्ठा किन साट्नुभयो ? किन मन्त्री भएपछि महाअभियोगको पक्षमा तपार्इं उभिनु भएन ? लोकमानको नियुक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेपछि तपाईंको पार्टी प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न पुग्यो । तपाईं किन मौन वस्नु भयो ? यसले तपाईको कथनी र करणी वीचमा आकाश पातालको भिन्नता देखिंदैन ?
६. तपार्इं मन्त्री पदमा रहंदा नै नेपालको इतिहासमा एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध तपाईंको पार्टीले महाअभियोग लगायो । तपाईंले सो महाअभियोगको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने अपेक्षा आम जनताको थियो । तर आदर्श र निष्ठा सवै नै मन्त्री पदसँग सौदा भएको हुँदा तपाईंले केही वोल्न सक्नु भएन । तपाईं आफूलाई योग्य उम्मेदवार ठान्नुहुन्छ तर तपाईंलाई दिएको मत तपाईंको पार्टी मार्फत हामीले किन दुरुपयोग गर्ने ? भाषणकला बाहेक शेरबहादुर देउवा र तपाईंमा नीति र कार्यक्रमगत के भिन्नता छन् गगनजी ?
७. २०७२ असोज महिनामा नेपालको संविधान जारी भएपछि प्रत्येक दिनजसो मिडियामा तपाईंका अन्तरवार्ता आउँथे । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो । भारतले संविधान विरुद्ध नाकावन्दी लगायो । तपाईं लगायत तपाईंको दल एमालेले लतारेपछि मात्र संविधान बनाउन राजी हुनुभयो । संविधान जारी गर्न अग्रसरता लिएवापत भारतले एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध खुवै तिकडमबाजी गर्यो । संविधान जारी गरेको जस आफू लिंदै, संविधान जारी गर्न अगुवाई गर्ने त्यहि केपी ओली हो भन्दै ओलीलाई मधेस विरोधी बिल्ला भिराउनुभयो । आफू नगर्ने, नगरेको कामको जस लिने, तर, गरेवापतको अपजस ओलीको टाउकोमा थोपर्ने तपाईंको पार्टीलाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाको विरोधी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसबेला एमालेले सवै दल मिलेर नाकावन्दीको सामाना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर तपाईंले एमाले र नेपाली कांग्रेस मिल्नै हुँदैन, ठूला दल मिल्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भनी नाकावन्दीको समयमा मुलुकभित्र दलीय विभाजनको वकालत गर्नु भएको थियो । गगनजी म तपाईंलाई ती अन्तरवार्ता फेरि सुन्न अनुरोध गर्दछु । र प्रश्न गर्न चाहान्छु– नाकावन्दीलाई कसिलो वनाउने हिसावले तपाईंले दलहरु विभाजन गर्न उक्साउने काम किन गर्नु भयो ?
मानिसको परीक्षा त्यसवखत हुन्छ जव उ पदमा पुग्दछ । तपाईंले आफ्ना मतदाताका मनमा आएका यी प्रश्नहरुलाई शान्त गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा गरेको छु । धन्यवाद ।
(काठमाडौं क्षेत्र नं ४ चावहिल निवासी बडाल अधिवक्ता हुन्)
सभार चक्रपथ डट्कम